प्रदेश १ पत्रकार महासंघमा उम्मेदवार को को भए ? कतिजनाको उम्मेदवारी प¥र्यो ? - Rastriya Yuvajagaran Nepali News
होमपेज फिचर प्रदेश १ पत्रकार महासंघमा उम्मेदवार को को भए ? कतिजनाको उम्मेदवारी प¥र्यो...
प्रदेश १ पत्रकार महासंघमा उम्मेदवार को को भए ? कतिजनाको उम्मेदवारी प¥र्यो ?
२० चैत्र २०७७, शुक्रबार २१:५८
विराटनगर स् नेपाल पत्रकार महासंघ पहिलो पटक प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट देशभरका जिल्ला, प्रदेश, केन्द्र, प्रतिष्ठान र एसोसिएटको निर्वाचन हुन ४ दिन बाँकी छ । महासंघको केन्द्रीय अधिवेशन फागुन ४ र ५ गते सम्पन्न भईसकेको छ भने आगामी २५ गते देशभर एकै पटक निर्वाचन हुँदैछ । देशभरका पत्रकारहरु अब चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् । सबैतिरका उम्मेदवारहरु आफूलाई विजयी गराउन सहयोग मागिरहेका छन् । यहि प्रक्रियामा प्रदेश १ मा विभिन्न पदमा ५६ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । बिहीबार प्रदेश समितिको कार्यालयस्थित निर्वाचन कार्यालयमा २१ पदका लागि ५६ जनाको उम्मेदवारी परेको हो ।
पत्रकार महासंघको प्रदेश समितिसहित जिल्ला र केन्द्रको निर्वाचन चैत २५ गते एकसाथ हुँदैछ । प्रदेश समितिका मुख्य निर्वाचन अधिकृत यज्ञ शर्माका अनुसार अध्यक्ष पदका लागि झापाका मोहनकाजी (न्यौपाने), मोरङका लिलाबल्लभ घिमिरे र इलामका सोमनाथ सुसेलीले उम्मेदवारी दिएका छन् ।
त्यस्तै उपाध्यक्षमा अर्जुन जम्मेली, रोहितकुमार राई र लवदेव ढुंगाना, महिला उपाध्यक्षमा कोकिला ढकाल र हिमाकुमारी चेम्जोङ, महासचिवमा फिफराज बेघा लिम्बू, बन्धु पोखरेल, विवेक गौतम र श्रीशिशा राईले उम्मेदवारी दिएका छन् ।
खुल्ला सचिव पदका लागि अविजाल बिष्ट, कौशल निरौला, देवेन्द्र कार्की र भक्तशेर लिम्बू, समावेशी सचिवमा सन्तवीर लामा र सन्तोष यादवले उम्मेदवारी दिएका हुन् । कोषाध्यक्ष पदका लागि गणेश साम्पाङ, विमल लामिछाने(बुद्धि) र सन्तोष रुचालको उम्मेदवारी रहेको छ ।
पा“च जना खुल्ला सदस्यका पदका लागि १४ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् । उम्मेदवारी दिनेमा कमल रिमाल, केशरबहादुर चौहान, केशव भट्टराई, गोपालप्रसाद पोखरेल, टिकाराम उप्रेती, तेजेन्द्र भण्डारी, तोयानाथ भट्टराई, ध्रुव भट्टराई, मिनराज ९प्रवास० उप्रेती, युवराज विवश, लिलाराज झापाली, सत्यनारायण शर्मा, सुमन गुरागाई, सुरेन्द्र भण्डारीले मनोनयन दर्ता गरेका छन् ।
तीन महिला सदस्यमा देविका चाम्लिङ राई, विनादेवी तामाङ, विनु तिम्सिना, माला पालुङ, शुभद्रा प्याकुरेल, सुमित्रा कोइराला, सुशीला पाठकले उम्मेदवारी दिएका छन् ।
दलित सदस्यमा पीबी दियाली र रणध्वज लोहार, आदिवासी जनजाती सदस्यमा उपेन्द्र चाम्लिङ, दिलकुमार लावती, विष्णु सुब्बा र यमनकुमार दनुवार रहेका छन् ।
त्यस्तै मधेसीतर्फको सदस्य पदमा चन्दनकुमार रौनियार, प्रमोदकुमार यादव, फुलचन्द मेहता, ब्रम्हदेव यादव, सूर्यनारायण यादव र अल्पसंख्यक सदस्यमा तावील अन्सारी, लिलाबहादुर सुनुवार र विजय धिमालले उम्मेदवारी दिएको निर्वाचन समितिले जनाएको छ ।
मनोनयन दर्ताका लागि बिहीबार ५ बजेसम्मको समय दिइएको थियो ।
अघिको समचार आपराधिक घटनामा बृद्धि, शान्ति सुरक्षामा सरकार उदासिन
अर्को समचार मुख्यमन्त्री राई विरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता